Ahoana no fandraisan'ny haitao OTT ny fahitalavitra | Martech Zone
Ahoana ny fakàn'ny teknolojia OTT ny fahitalavitrao
Alakamisy, Jona 8, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Jeffrey Hayzlett
Raha efa nijerijery fahitalavitra tao amin'ny Hulu ianao na nijery horonantsary tao amin'ny Netflix, dia efa nampiasainao ny-ny-tampon'ny afa-po ary mety tsy tsapany akory. Antsoina matetika hoe OTT amin'ny vondrom-piarahamonina haino aman-jery sy haitao, ity karazana atiny ity dia manalavitra ireo mpamatsy fahitalavitra nentim-paharazana ary mampiasa ny Internet ho toy ny fiara handefasana atiny toa ny fizarana farany an'ny vahiny Things na any an-tranoko dia Abbey Downton.
Tsy ny teknolojia OTT ihany no mamela ny mpijery mijery seho sy horonan-tsary amin'ny tsindry bokotra iray, fa manome azy ireo fahalalahana hanao izany amin'ny fomban'izy ireo manokana isaky ny maniry. Saintsaino kely fotsiny. Impiry ianao taloha tsy maintsy miala amin'ny drafitra satria tsy misy fomba tsy hahadinoanao ny famaranana amin'ny fizarana fahitalavitra tianao indrindra?
Ny valiny angamba dia talohan'ny nampidirana ny VCR sy ny DVR - ny ezahiko lazaina dia ny fomba fanjifantsika haino aman-jery niova tanteraka. Ny teknolojia OTT dia namaha ny fameperana misy eo amin'ireo mpamatsy atiny sy ny mpampiasa raha mbola manome ny mpanjifa fidirana amin'ny programa mampihetsi-po antenainy avy amin'ny sarimihetsika lehibe sy fahitalavitra lehibe. Ary koa, nolazaiko ve fa tsy ara-barotra ny ankamaroany?
Talohan'ny fampidirana ny atiny OTT - ny boky voalohany nahalalana an'io teny io dia tao amin'ny boky 2008 Fampidirana ireo milina fikarohana amin'ny video nataon'i David C. Ribbon sy Zhu Liu, ny fahazaran'ny fahita amin'ny fahita amin'ny fahitalavitra dia nijanona tamin'ny ankapobeny nandritra ny taona maro. Raha fintinina, nividy fahitalavitra ianao, nandoa onjam-peo ho an'ny fidirana amin'ny fantsona fantsona iray, ary voila, nanana loharanom-pialamboly ianao ny hariva. Na izany aza, niova be ny toe-javatra satria maro ny mpanjifa nanapaka ny tadiny sy izay fangatahana apetrak'ireo orinasa tariby aminy. Araka ny 2017
Araka ny voalazan'ny 2017 fanadihadiana notontosain'ny Leichtman Research Group, Inc., 64% amin'ireo tokantrano 1,211 54 nanaovana fanadihadiana dia nilaza fa mampiasa serivisy toa an'i Netflix, Amazon Prime, Hulu, na horonan-tsary fangatahana izy ireo. Hitan'izy ireo ihany koa fa ny 28% amin'ireo namaly dia nilaza fa miditra matetika any Netflix any an-trano izy ireo, efa ho avo roa heny ny isan'ny (2011 isan-jato) niverina tamin'ny 1. Raha ny marina, hatramin'ny Q2017 XNUMX, Netflix dia nanana mpamandrika mivantana 98.75 tapitrisa manerantany. (Ity misy cool tabilao mampiseho ny làlan-kalehany hanjakan'izao tontolo izao.)
Ary raha OTT nahita fitomboan'ny lazan'ny tokatrano eran'izao tontolo izao, faritra iray manokana izay tsikaritro ny toerana nahazoany fihenam-bidy tato ho ato dia eo amin'ny sehatry ny orinasa. Nandritra ny herintaona lasa izay dia nahita fikambanana maromaro aho naka ny teknolojia OTT ho fomba iray hanehoana ny mombamomba azy ireo na hanatonana ny olon-kafa amin'ny fotoana fohy. Ity fahaiza-manao ity dia manan-danja indrindra amin'ireo mpitantana be atao izay mitaky ny vaovao farany na aiza na aiza misy azy ireo amin'izany fotoana izany.
Ohatra iray lehibe amin'izany C-Suite TV, izay mandefa ny fandaharana amin'ny fahitalavitra C-Suite miaraka amin'i Jeffrey Hayzlett. Tany am-piandohan'ity taona ity dia nametraka fiaraha-miasa ny fantsona fandraharahana fangatahana fangatahana ReachMeTV, “tambajotra fialamboly marobe sy sehatra fitsinjarana manerantany”, handefasana ny seho amin'ny fahitalavitra amin'ireo seranam-piaramanidina 50 lehibe indrindra any Etazonia sy hotely 1 tapitrisa mahery manerana ny firenena. Mampientam-po ny mahita ny programa misy ahy mahazo fahitana fanampiny, indrindra amin'ny mpihaino kendrena tiako hahatongavana.
Raha ny hevitro, ny seranam-piara-manidina sy ny hotely dia tsy isalasalana fa ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra hisarihana ny saina tsy mizarazara an'ireo mpivarotra raharaham-barotra izay matetika mahita fa ny hany fotoanan'izy ireo mandritra ny andro dia ny miandry fiaramanidina na miala sasatra ao amin'ny hotely fandraisam-bahiny (alaivo avy amin'olona io iza no mahalala an'io tsara koa).
Talohan'izay, raha misy mpitantana orinasa te-hijery ireo fampisehoana orinasa, dia tokony hataony amin'ny fomba "fomba taloha" amin'ny fahitana azy amin'ny fotoana manokana. Saingy amin'ny fampidirana ny teknolojia OTT, afaka miditra amin'ny programa izay mifanaraka amin'ny tombotsoany amin'ny fandaharam-potoan'izy ireo manokana izy ireo.
Azoko antoka fa hitombo hatrany amin'ny ho avy ny teknolojia OTT rehefa lasa fiarahamonina mandroso nomerika kokoa isika. Ity fitomboana ity dia ahafahan'ny orinasa sy ny mpanjifa mifampitohy amin'ny sehatra manerantany raha tsy misy ny teritery nomen'ireo mpamatsy tariby antsika hatry ny ela. Raha mitombo ny fangatahana fidirana eo noho eo amin'ny fandaharana fialamboly sy fanabeazana dia hahafinaritra ny mahita ny halaviran'ny teknolojia OTT amintsika. Tsy haiko ny momba anao, fa hanadihady aho hahafantatra.
Tags: amazon primeC-Suite TVC-Suite miaraka amin'i Jeffrey HayzlettHuluvondrona mpikaroka leichtmanNetflixottny-ny-tampon'nyReachMeTVhoronan-tsary amin'ny fangatahana
Jeffrey Hayzlett dia mpanentana fahitalavitra sy radio voalohany C-Suite miaraka amin'i Jeffrey Hayzlett ary Fomba fijery mpanatanteraka amin'ny fahitalavitra C-Suite ary Ny orinasa rehetra miaraka amin'i Jeffrey Hayzlett ao amin'ny C-Suite Radio. Hayzlett dia olo-malaza manerantany, mpandahateny, mpanoratra amidy indrindra ary filohan'ny C-Suite Network, tranon'ny tambajotran'ireo mpitarika C-Suite matanjaka indrindra eran-tany. Mifandraisa amin'i Hayzlett amin'ny Twitter, Facebook, LinkedIn, na Google+.
TurnTo: hevitra syndika miaraka amin'ireo mpaninjara ny vokatrao